I-Quantum ku-IBC2019: Ukusiza amakhasimende ukuthi adale, abelane futhi alondoloze okuqukethwe kwevidiyo - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Quantum ku-IBC2019: Ukusiza amakhasimende ukuthi adale, abelane futhi alondoloze okuqukethwe kwevidiyo
I-Quantum ku-IBC2019: Ukusiza amakhasimende ukuthi adale, abelane futhi alondoloze okuqukethwe kwevidiyo
Lo nyaka e-IBC2019 I-Quantum izobonisa iphothifoliyo yayo yomkhiqizo enwetshiwe kakhulu eyenzelwe ukuqhutshwa kwemithombo yezindaba yokufika ekugcineni. Vakashela I-QuantumUkuma (# 7 B07) ukubona izixazululo zokukhiqizwa okusekwe, ukucubungula kanye nokuthuthwa kokuqukethwe, ukuhlelwa kwes studio nokuqedelwa ku-8K, kanye nokugcinwa kwemidiya yedijithali.
"Sithuthukise kakhulu ijubane lethu lokuqamba imali ngonyaka ophelile, singenisa ukugcinwa kwemiklomelo ye-NVMe ngokuwina umklomelo, izinsiza zamafu kanye nama-analytics, isitoreji somphetho esikhiphekayo, isitoreji sokubhekwa kwevidiyo, nokuningi. I-Quantum selwenziwe ushintsho olukhulu, futhi amakhasimende ethu aqaphele. E-IBC, izivakashi zizobona okusha I-Quantum ngokugxila kakhulu ekusheshiseni nasekuthuthukiseni ukugeleza kwabezindaba, ”kuphawula u-Eric Bassier, iNhloko yoMkhiqizo noMkhakha wezobuchwepheshe.
Amaphuzu avelele afaka:
Umugqa Womkhiqizo Ovuselelwe Ngokuphelele we-StorNext Product
I-Quantum izokhombisa inguqulo yakamuva yohlelo lwayo lwefayela lokuwina i-StorNext nochungechunge lwamuva lwemishini ye-StorNext. I-Quantum izokhombisa ukusebenza kabusha kwensiza yokusebenzisa amandla kabusha nge-2x ukusebenza ngokushesha, ukuhlela kanye nemibala yokuqukethwe kwe-8K ngesikhathi sangempela, amandla okuqagela amasha kanye nokuhlaziya, izindlela ezintsha zokuhlanganisa nefu, nolwazi lomsebenzisi olwenziwe lula.
I-Quantum Isitoreji se-F-Series NVMe
Ukwenza i-European Dut yayo I-Quantum I-F-Series, iqoqo le-NVMe le-Ultra esheshayo, elitholakala kakhulu lokuhlela, ukunikezela, nokucubungula okuqukethwe kwevidiyo neminye imininingo egciniwe enkulu engahlelwanga.
Yakhelwe ukusebenza, ukutholakala kanye nokwethenjwa, i-F-Series isebenzisa ama-drive we-NVMe flash for Ultra okusheshayo okufundwayo nokubhala - kuze kube izikhathi ezinhlanu ngokushesha kunokwezifiso zesiko zokugcina / ukusakazeka kwenethiwekhi - ukuletha ukuhlela kanye nokunikeza nge-4K okusheshayo ne-8K ngokushesha ngaphezu kwazo zonke ezinye izixazululo zangaphambili zokuncintisana. Ngokusebenzisa ubuchwepheshe bendawo ye-RDMA yokusika onqenqemeni, i-F-Series ihambisa ukusebenza okungaguquki kwe-latency ngaphezulu kwamanethiwekhi we-IP, kuqeda isidingo sesiteshi esibizayo, esiyinkimbinkimbi se-SANs.
Noma yisiphi isitudiyo, indlu yangemuva, noma umsakazi osebenza ngokuqukethwe okuphezulu kakhulu ngamanani aphezulu wohlaka futhi abheke ukusuka esiteshini se-fiber esiya kumakhiwonchanti asuselwa ku-IP azofuna ukufunda kabanzi nge-F-Series.
Funda isimemezelo esigcwele lapha.
Isitoreji se-R-Series Edge
I-Quantum futhi izokhombisa isixazululo sayo sesitoreji esisuswayo se-R-Series. Yakhelwe ukugcinwa kwevidiyo yeselula neyikude, i-R-Series ilungele ukuthutha okuqukethwe phakathi kokukhiqizwayo okusethwe nasesitudiyo.
Izinsizakalo Zamafu Ezisakazwayo kanye ne-Cloud-based Analytics Software
With I-Quantum'suice entsha ye-Cloud Distributed Cloud Services suite, amakhasimende wemidiya manje angakwazi ukuhambisa kabusha izinsiza ezibalulekile ze-IT nezinjiniyela ukuze zigxile ekuhlangabezaneni nezinjongo zebhizinisi, ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi nolwenyusa ukubuyiselwa kwemali ekugcinweni kwevidiyo.
Inikezwe amandla yi I-QuantumIsoftware entsha ye-Cloud-based Analytics (CBA), i-Cloud Distributed Cloud Services suite inikezela ngendawo enkulu lapho I-Quantum imikhiqizo ithumela umkhiqizo kanye nemininingwane yemvelo. I-QuantumIthimba lezinsizakalo zomhlaba wonke lisebenzisa le datha ukuphatha ngempumelelo imvelo yamakhasimende, kungaba njengensizakalo yokusebenza noma njengokuhlinzekwa kwe-Storage-as-a-Service.
I-Quantum ubuchwepheshe kanye nezinsizakalo zisiza amakhasimende ukuba athathe, adale futhi ahlanganyele okuqukethwe kwe-digital - futhi alondoloze futhi avikele amashumi eminyaka. Ngesisombululo esakhiwe kuzo zonke izigaba zendlela yokuphila kwedatha, I-QuantumAmapulatifomu anikela ngokusebenza okusheshayo kwevidiyo yokulungiswa okuphezulu, izithombe, ne-IoT yezimboni. Yikho izinkampani ezihamba phambili kwezokuzijabulisa emhlabeni, ama-franchise ezemidlalo, abacwaningi, izinhlangano zikahulumeni, amabhizinisi, nabahlinzeki bamafu benza umhlaba ujabule, uphephe futhi ngobuchule I-Quantum. Bona ukuthi kanjani www.quantum.com.
Chofoza lapha ukufinyelela izithombe eziphezulu zokuhamba I-QuantumUkubuka kuqala kwe-IBC2019
Ukuhlela isithangami I-Quantum kwa-IBC, thintana [Email protected]
Memezela i-Aurora Health Campaign / I-Colonie Ukusakazwa-Abezindaba Komphakathi Ukusakaza-SocialMedia Ukusakaza-SocialMeida Ukuhlela I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor SJGolden - I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 Ama-spears nama-Arrows Storage umbhalo we-subtitling, i-Digital Nirvana, ukuqapha imidiya, i-IBC I-Colonie I-Colonie - Izindaba I-COLONIE / Chicago esingokoqobo virtual	2019-08-12
Ngaphambilini: Umkhiqizi nomculi uPaul Gala Uphakamisa Ikhwalithi Yezimphumela ze-PMCXXUMX Monitors
Olandelayo: Umakhelwane Omnandi Superhero Uthola Isisombululo Esihle se-Mic Spider-Man: Ukuza ekhaya